सार्वजनिक भयो ज्योती मगरलाई राती होटलमा दुव्र्यवहार गरेको भिडीयो – हेर्नुहोस भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सार्वजनिक भयो ज्योती मगरलाई राती होटलमा दुव्र्यवहार गरेको भिडीयो – हेर्नुहोस भिडियो सहित
admin November 26, 2018 भिडियो 0
सांगितिक कार्यक्रमका शिलशिलामा चितवन गएकी गायिका ज्योति मगरमाथि आयोजक मध्येका एक व्यक्तिले दुव्र्यवहार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । चितवनमा गत मंगलबार सम्पन्न एक सांस्कृतिक कार्यक्रमपछि आयोजकले खाना खाने बहानामा होटलमा लगेर दुव्र्यवहार गरेको ज्योति मगरले बताएकी छिन् ।
मध्यराति आफुमाथी दुव्र्यवहार भएपछी उनले कान्तिपुर साप्ताहिकमा कार्यरत पत्रकार रामजी ज्ञवालीलाई टेलिफोनमार्फत दुव्र्यवहारबारे जानकारी गराएकी थिईन । आफूलाई आयोजकमध्येका एक सदस्यले सेलिब्रिटी जस्तो मान्छे खुला ठाउँमा खाना खान हुन्न, सेक्रेट ठाउँमा खानुस कोठाको व्यवस्था छ भनी कोठामा जाउँ भनेको ज्योतिले बताएकी छिन् ।
तर, उनले आफू बसेको कोठामै खाना आउँछ भनेर जान नमान्दा आफुमाथी दुव्र्यवहार भएको बताएकी छिन् । ज्योतिले जान नमानेपछी ती व्यक्तिले ज्योति बसेकै कोठामा रक्सी मगाएर एकैछिन गफ गर्छु अनि निस्कन्छु भन्दै ११ बजेसम्म पनि निस्कन नमानेपछि ज्योतिले असुरक्षित महसुस गर्दै होटलका स्टाफसँग सहयोग मागेकी थिइन् ।
ज्योतिले नजिकको एक बहिनीलाई कोठामा बोलाएपछि ती व्यक्तिले नराम्रोसँग ज्योतिसँग मुख छाडेको उनले बताएकी छिन् । ज्योतिका अनुसार उनले भन्नु नभन्नु सवै भने । कार्यक्रममा मैले बोलाएको हो, पैसा मैले तिरेको हो, यो कोठाको पनि भाडा मैले तिरेको हो, पख तेरो अब के गर्छु ! किन अरुलाई बोलाएको हो भन्दै ज्योतिमाथि खनिएका थिए ।
त्यसपछि ज्योतिले खुसुक्क प्रहरी बोलाएर ती व्यक्तिलाई जिम्मामा लगाएकी थिइन् । नानाथरी अपशब्द बोल्ने, मनपरी गर्ने, तेरो अब के गर्छु पख भन्दै आफूलाई मध्यरातमा धम्की दिने ती व्यक्तिको नियत एकदमै गलत भएको ज्योतिले बताएकी छिन् ।
गायिका ज्योति मगरसँग मध्येराति १ बजेतिर भएको कुराकानीबारे स्ट्याटस लेख्दै पत्रकार रामजी ज्ञवालीले लेखेका छन्–‘ आत्तीदै राती १ वजे मसँग ज्योतीले भनिन्, ‘मलाई जे पनि हुन सक्छ, एकदमै डर लागिरहेको छ ।’
अहिले प्रहरीले ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ । प्रहरीले ती व्यक्तिलाई माफी माग्न लगाएर घटना थामथुम गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । यसबारेमा ज्योति मगरले आफ्नो आधिकारिक धारणा मिडियासामु बताएकी छैनन् ।
पत्रकार रामजी ज्ञवालीले ज्योति मगरसँग भएको कुराकानिबारे पोष्ट गरेको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै :
टंक सर मैले सहयोग गरेको रकम किन भुईकटरलाई दिनु भएन ? (मार्मिक भिडियो हेर्नुहोस्)
युएईबाट आयो दुःखद खबरः दुबईस्थित विमानस्थल डुबानमा, उडान रद्दका कारण यात्रुहरू अलपत्र !
देवरले आफ्नै भाउजुलाई रडले कु’टि कु’टि ह’त्या, भाग्दा भाग्दै घरको गेटमा गर्यो ज्या’न
जहाज चढ्दै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तीन पटक लडेपछि.. (भिडियो सहित)